Banaanbaxyo ka dhacay dalka Baxrayn ,iyadoo lagu jiro sanad-guuradii kowaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii dad-weyne ee dalkaasi – Radio Daljir
Banaanbaxyo ka dhacay dalka Baxrayn ,iyadoo lagu jiro sanad-guuradii kowaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii dad-weyne ee dalkaasi
Manama,Feb 14 -Ciidamada ammaanka ee dalka Baxrayn ayaa sunta gaaska ah ee dadka ka ilmeysiisa u adeegsatay mudaharaadayaal isu soo baxay oo xusayey kacdoonkii dadweyne ee Dimuquraadiyad-doonka ahaa ee ka bilaabmay jaziiradaasi yar ee ku taalla gacanka carabta sanad kahor.
Mudaharadayaasha ayaa isku dayayey in ay la wareegaan fagaaraha luulka ee ku yaalla magaalada caasimada ah ee Manama oo sanad ka hor xudun u ahaa kacdoonkii dad weyne ee ay shiicadu hormuudka ka ahayd ee lagaga horjeeday boqortooyada Sunniga ah ee dalkaasi maamusha.
Kumaananka tirsan ciidamada rabshadaha hor taga iyo xoogag kale ayaa loo diray boqortooyadaasi Baxrayn sanad ka hor si ay xaaladda u xakameeyaan.
Ilaa 60 qof ayaa ku dhintay kacdoonkii ay shiicadu hor boodeysay ee dalkaasi ka dhacay bishii February ee sanadkii hore.
Wakaalada wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ciidamadda amaanku ay ku guulaysteen in ay banaanbaxayaasha ka hor istaagaan in ay la wareegaan fagaaraha Luulka ama Lu?lu?a ee ku yaalla magaalada caasimada ah Manama.
Mudaharadaayaasha reer Baxrayn oo intooda badan ay ka socdaan dadka shiicadda ee dalkaasi u badan ayaa dalbanaya boqortooyo dastuuri ah oo ka hirgasha dalkaasi,laakiin boqortooyadda Sunniga ah ayaa ka shakisan in khatar lagu yahay jiritaankeeda.
Xukuumadda boqor Xamad ben Ciisa Al-khaliifa ayaa sheegtay in ay ka go?antahay in la sameeyo isbedel dhinaca siyaasadda ah,laakiin mucaaradka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in wax yar laga qabtay balanqaadka dowladda.
Boqorka dalka Baxrayn ayaa asaasay gudi madaxbanaan oo baadha tacadiyadii ka dhacay dalkaasi,kaddib markii ay isasoo tareen canbaaraynta caalamiga ah.
Warbixin la soo saaray bishii November ayaa lagu xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay adeegsadeen awood xad-dhaaf ah islamarkaana jirdil baahsan lagula kacay maxaabista.
Bishii February ee sanadkii ayaa mudaharaadayaashu muddo bil ah haysteen fagaaraha luulka ee badhtamaha magaalada caasimada ah ee Manama, waxana halkaasi laga saaray ,kaddib markii dalalka Jaarka ah sida Sadi Arabia iyo dalal kale oo Sunniga gacanka carabta ah ay halkaasi u direen ciidamada loo yaqaan gaashaanka gacanka ama ( Dircul Khaliij) oo xilligaasi boqortooyadaasi Sunniga ka caawiyey in ay halkaasi ka sifayso mudaharaadayaasha .